Huawei U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်နှိုးနည်း ~ မြန်မာမိုဘိုင်းနည်းပညာ Huawei U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်နှိုးနည်း
Home » Hardware အကြောင်း » Hardwareပိုင်းဆိုင်ရာ » Huawei U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်နှိုးနည်း
Huawei U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်နှိုးနည်း
ကျွန်တော် U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်နှိုးတာလေးကို သာမန် User တွေ ဗဟုရအောင်ပိုစ့်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်တင်ပေးတာပါခင်ဗျာ
အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ Huawei_U8650_BOOT.bin ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းရပါမယ် ဒါက အဲဖိုင်ဒေါင်းတဲ့ မူရင်းလင့်ပါ
ဒေါင်းပြီးရင် GPGJTAG-pro Box ကို PC နဲ့ ချိတ်ပြီး အောက်ပုံ မှာ ပြ ထားတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ရပါမယ်
( 1 ) ပြ ထားတဲ့ နေရာမှာ ဖုန်းအမျိုး အစားကို ရွှေးပေးရပါမယ်
(2) နေရာမှာ ဖုန်းမော်ဒယ် ကို ရွှေးပေးရပါမယ်
(3) နေရာ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း GPGJTAG-pro Box နဲ့ ဖုန်းချိတ်မဲ့ ကြိူး ကို ဖုန်းမှာ သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေ အလိုက် ခဲဆော် ရပါမယ် ခဲဆော်ပြီးရင် GPGJTAG-pro Box နဲ့ ချိတ် လိုက်ပါမယ်
(4) နေရာက Set Defaul Point ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပေးရပါမယ်
( 5) နေရာမှာတော့ မိမိဖုန်း ကို ပြန် Flash မဲ Boot.bin ဖိုင်အလိုက် ရွှေးပေးရပါမယ် ကျွန်တော် U8650 အတွက်တော့ 4M ကိုရွှေးလိုက်ပါတယ် အဲအဆင်တွေပြီး သွားပြီ ဆိုရင်
(7)နေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလော့ ဆွဲထားတဲ့ Huawei_U8650_BOOT.bin ကို သွားရွှေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်
(6) နေရာလေးက Write ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဘောက်တစ်ခုကျလာရင် Ok ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီး သူနှိပ်ခိုင်းသလို Power Key
ကို နှိပ်ထားပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် စပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် 100% ပြည့်သွားပြီ ဆိုရင် Power Key ကို လွှတ်ခိုင်းပြီးနောက်တစ်ခေါက် အလုပ်လုပ် နေပါလိမ့်မယ် 100% ပြည့်ပြီး Write Finish ဆိုရင်တော့ Deadboot ကိုပြန်နှိုးခြင်း အောင်မြင်ပါပြီခင်ဗျာ ဖုန်းမှာခဲဆော်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ ကို ဖြုတ်ပြီး Battery တပ် ပြီး Power ခလုပ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ Huawei Logo လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် အမောပြေ ပြီ ပေါ့ဗျာ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Firmware ထဲက dload ဖိုဒါလေးကို Sdcard ထဲ ကူးထည့်ပြီး Firmware ပြန်တင်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ပြီးပြည့်စုံ သွားပါပြီ ခင်ဗျာ
Ref: Ko NayLa
Facebook Name...B Black Ruby
Posted in: Hardware အကြောင်း,Hardwareပိုင်းဆိုင်ရာ
▼ 09/07 - 09/14 (26)
How to Cancel PayPal Billing Agreement or Automati...
ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာ ကြော်ငြာကြည့်တယ်ဆိုရင် ငွေပေးတယ်ဆ...
iOS နှင့် Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Video Callling...
Video Call စနစ်ပါပါဝင်လာခဲ့တဲ့ Viber 5.0 Download ...
ရုပ်တူ ကာတွန်းပုံစံလေးတွေလုပ်ရန်အတွက် FaceQ
အခုလက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ လူပုံလေးတွေဖန်တီးလို့ရတဲ့ Fa...
CWM Chinese စာတွေကို English ဘာသာပြန်
Android မှာ Safe Mode ၀င်ရခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းနည်း
Huawei Y-511-U00 & T00 Ofiicial Firmware
Android Phone မှ recovery.img နဲ့ boot.img တွေကို ...
Android Application Download ၀က်ဆိုဒ် (10)ခု
PIN-Patten-Passwords unlock Flashable zip
Huawei U8650 Deadboot ကို GPGJTAG-pro Box နဲ့ ပြန်...
Huawei ALL MTK SP FlashTools Firmware (38) ဖိုင်
Coolpad Rom စုစည်းမူ့
ဖုန်းService သမားများအတွက် UNI Android Tools
Huawei H30 C00 L01 L01M L02 Firmware Download
Huawei Y535-C00 ကို Root စရာမလိုတဲ့ Myanmar Font
MTK Device ဆိုတာ ???
Service သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ Andriod နှင့်ပတ်သက်၍ သ...
♪♪ ၇၉ ဒေါ်လာတန် quad-core Android tablet ကို E Fun ...
Step2Update Fail Error ဖြေရှင်းရန်အတွက်
ဖုန်းတစ်လုံး ရေထဲကျသွားလျှင် သိထားသင့်သော အချက်မျာ...
Cool My Droid
G730-C00 network unlockဖြစ်နေသူများအတွက်